Ubhalwa njani i-Autobiography yeNkqubo yoTshintshiselwano lwaBafundi ngo-2022
Xa ufumana ithuba lokutyelela ilizwe lasemzini njengomfundi, ufuna ukwamkela ukufunda okuya kuza nelo thuba. I-autobiography oyithumelayo kusapho olunokubakho luphawu lokuqala, ngoko ufuna ukuyenza ilungile. Abafundi abaninzi bafaka izicelo zokuvulwa okunjalo minyaka le, besenza iindawo ezifumanekayo zibe nokhuphiswano.
Iinkqubo ezininzi zokutshintshiselana zifuna ukuba umfundi azicacisele usapho olutsha olunokubakho kangangoko kunokwenzeka. Bafuna i-CV ezakubabonisa ukuba kutheni kufuneka babe nawe emzini wabo. Ungajonga iisampulu zesincoko se-autobiography kwi-intanethi ukufumana uluvo lwento elindelekileyo, ukuze ube nexesha elilula lokwenza eyakho. Iisampulu zasimahla zezincoko kunye neenguqulelo ze-autobiography ozibona kwi-intanethi zivela kubafundi abalandele indlela efanayo nawe. Azinangqiqo kuphela kodwa ziyakhuthaza.
Akukho kakhulu kungena kwezi zinto zicengayo incoko. Ufuna ukubonisa ukuba unolwazi olucacileyo lwelizwe elibamba umkhosi, inkcubeko yalo kunye nembali. Kukwanceda ukukhupha izinto ezimbalwa malunga nelizwe lakho, ukuze bazi ukuba baya kufunda into entsha.
Ukuba awukwazi ukwenza umsebenzi omhle kakhulu - kwaye khumbula ukuba ufumana ithuba elinye kuphela lokwenza umbono, kukho iitoni zababhali abanokukunceda ubeke iingcinga zakho ngamazwi.
Amanyathelo abalulekileyo ekuBhaleni i-Autobiography
Elona phepha libalaseleyo lentshayelelo akunyanzelekanga ukuba libe lelasesikweni I-autobiography. Aba bamkeli-zindwendwe badinga umntu onobuntu obuqaqambileyo ngokubhala kwabo kunye nobonisa ukuba banesicwangciso sekamva labo. Bafuna ukuba yinxalenye yohambo lwakho, kodwa kuphela ukuba uvakala ngathi uyayazi into oyifunayo. Nazi ezinye iindawo eziya kwenza isicelo sakho sigqame.
Funda indawo oya kuyo
Kuya kufuneka ukhethe eli lizwe ngesizathu, ke ngoku thatha ixesha lokulifunda. Funda ngembali yayo, iiholide ezithetha okuthile kubemi, imidlalo, ukuzonwabisa, izikolo zabo, ezopolitiko zabo, kunye nemicimbi yangoku yelizwe ngokubanzi.
Ngokuxhomekeke kubantu onokuhlala nabo, ufuna ukwazi iincoko zesiqhelo zesidlo sangokuhlwa usapho oluqhelekileyo kwelo lizwe lunokuba nalo.
Funda ngokutya kwawo, ulwalamano lwawo nabamelwane, nangayo nantoni na enokubangela incoko. Ngoba? Kuba kangangoko uya kufunda izinto malunga nelizwe, ufuna kwakhona ukuba ngumntu oncokolayo xa ubizwa. Bonisa ulwazi lwakho ngendawo ekuyiwa kuyo emaphepheni akho.
Le nxalenye kufuneka ibe mfutshane kwaye ibe mnandi. Bazise kancinci ngawe nokuba kutheni ukhetha ukufunda kwilizwe labo. Akunyanzelekanga ukuba ube mhle kakhulu apha, kangangokuba uvakala ulangazelela ukukholisa.
Uninzi lwabantu lufuna ukusebenza okanye ukusebenzisana nabantu abavumela ukuba amazwi abo aviwe. Unokufunda okunye kwi-intanethi izincoko simahla ukubona indlela abantu abazazisa ngayo. Ezi zincoko zasimahla kunye namaphepha zivela ikakhulu kubantu abafake izicelo ngempumelelo zokubamba kumazwe angaphandle. Njengoko kuhlala kunjalo, ii-intro kufuneka zibe zifutshane kwaye zichaneke.
Iinjongo Zakho kunye neeNzuzo zeNkqubo
Sebevile ukuba kutheni ufuna ukufunda phesheya; ngoku baxelele usukelo lwakho lwekamva. Ngaba ukufunda kwilizwe labo kunye nokuhlala nabo kuya kuba nefuthe kwikamva lakho kunye neenjongo ozibekele zona? Le nxalenye kufuneka ibe nolwazi ngakumbi kunengxoxo. Kukho imizekelo ecacileyo onokuthi uboleke kuyo ukukunceda ukuba ufumane le nxalenye ngokufanelekileyo.
Ke, kutheni wena hayi amawaka abanye abafake izicelo? Uya kuba nethuba lokuphendula oku kwileta yakho ngokufutshane.
Ufuna ukuvumela ubuntu bakho kunye nemvakalelo yokuzonwabisa ikhanye ngelixa ubonisa iinjongo zakho kunye nendlela ezihambelana ngayo nesicwangciso. Khumbula ukuba uthe ngqo kwaye unyanisekile xa uthetha ngawe, kodwa kwangaxeshanye ungagqithisi loo mdla.
Kwakhona ufuna ukuzithemba xa uthetha malunga nempumelelo yakho ngaphandle kokuba corky. Eli asiloxesha lokugxininisa impumelelo yakho, ke zive ukhululekile ukubakhulisa, kodwa ayilondlela yokuvakala unekratshi. Cinga ngale CV kuphela onokuthi uyibhale kwaye uthathe isigqibo malunga nokuba usapho lomkhosi kufuneka luyibone njani.
Boleka kwiiSampulu zokuBhala ngokuFundiweyo kwi-Intanethi
Ukuba unokuqesha iingcali ukuba zikuncede ubhale elona phepha ligqwesileyo, kufuneka kuba ezi ziqwenga zinokuba nzima kancinci. Ukuba awukwazi, fumana itemplate yeesampulu kwi-intanethi onokuyisebenzisa ukwenza inqaku lakho.
Elona candelo lilungileyo, nangona kunjalo, kukonwaba kakhulu xa ubhala oku kangangoko kunokwenzeka. Ngapha koko, eyona nto ibalulekileyo kukuthetha inyani, kwaye oko kulula kuba umnikazi wayo. Konke okugqibelele!
Post Previous:Kutheni ukufundela kwelinye ilizwe ngamava atshintsha ubomi
Okulandelayo Post:Amacebiso Aluncedo Ekubhaleni Ingxelo Yobuqu